ဖန်တီးပုံဖော်ခြင်း – Grab Love Story
သူ့စိတ်ထဲမှာ သူမြင်တွေ့နေကျမိန်းမများကို မှန်းပြီးဂွမ်းဆက်ထုနေသော်လည်း နောက်ဆုံးသူ့မျက်လုံးထဲမှာ ခုနကသူမြင်ခဲ့ရသည့် ဒေါ်လေးသီသီစိုးရဲ့ နောက်ပိုင်းအလှကြီးကို မြင်ယောက်လာမိသည်။ စိတ်ထဲမှာမလုံမလဲဖြစ်မိသော်လည်း ထုရင်းနဲ့ ဒါကြီးကိုဘဲမြင်ယောင်လာမိသည်။ မထူးဘူးလို့ ဆက်တွေးမိပြီး ဆက်မှန်းကာ ထုလိုက်သည်။ အင်း..အင်း…အင်း.. ဒေါ်လေး..ဒေါ်လေး….အအ.. ကျော်ခိုင်ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့လရေတွေပန်းထွက်သွားပြီး သူ့လက်မှာပေပွသွားသဖြင့် ပုဆိုးနဲ့သုတ်လိုက်ရသည်။ ယခုမှဘဲကျော်ခိုင်ရဲ့ ကြွတက်နေသော သုတ်သွေးများကား ယာယီငြိမ်သက်သွားလေတော့သည်။ ညနေကျရင် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူထံမှာ နောက်အပြာ စာအုပ်တစ်အုပ် သွားလဲဖို့ကို သူတွေးနေမိသည်။ ဒေါ်သီသီစိုးကား မှန်တင်ခုံရှေ့မှာ ခေါင်းဖြီးရင်းစဉ်းစားနေမိသည်။ သြော်..ကျော်ခိုင်တောင်တော်တော်ကြီးလာပြီဘဲ။ သူမလက်ပေါ်တွင် ကြီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျော်ခိုင်အဖေနှင့်သူမကား မောင်နှမ၀မ်းကွဲတော်စပ်သည်။ သူမ တက္ကသိုလ်တက်ရင်း သူမယောင်္ကျားဖြစ်သူ ကိုကျင်လွန်နဲ့ ညားခဲ့သည်။ ကိုကျင်လွန်ကားတရုတ်။ သူမနှင့်ကိုကျင်လွန်မှာ သင်းသင်းမင်းဆိုသော သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိသည်။ ကျော်ခိုင်ထက် (၁)နှစ်ငယ်တော့ ဒီနှစ်ဆို(၁၈)နှစ်ပြည့်တော့မည်။ ကျော်ခိုင်ကား ဒီနှစ်(၁၀)တန်းနှစ်။ ရွာမှာ မူလတန်းကျောင်းဘဲရှိသဖြင့် သူ့ဖခင်က မြို့မှဝမ်းကွဲ ညီမဖြစ်သူ သီသီစိုးထံသို့(၅)တန်းကတည်းက ပို့ထားပြီး ကျောင်းတက်စေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျော်ခိုင်ကား(၁၀)တန်း တစ်နှစ်ကျခဲ့ သဖြင့် ဒီနှစ်အပြင်ဖြေ။ သူမသမီးသင်းသင်းမင်းကား ဒီနှစ်(၁၀)တန်းနှစ်။ သြော်..ကျော်ခိုင်တောင်လူပျိုဖြစ်နေပြီကိုး။ အင်းလေ… သူမ အသက်တောင် ၄၁ နှစ်ထဲ ရောက်နေပြီလေ။ ဒါပေမဲ့ ဒေါ်သီသီစိုးတို့ကားသူဌေးကတော်ပီပီ အငြိမ်းစားနေရလို့လားမသိ။ နုဖတ်နေသည်။ (၃၀)ကျော်ခန့်သာထင်ရသည်။ အစားကောင်းအသောက်ကောင်းတွေစား အားကစားလည်းလိုက်စားသဖြင့် ကိုယ်လုံးကလည်း ရွေဘိုမင်းကြိုက် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ပင်။ တခြားသူအတွက်တော့ သွားရည်ယိုစရာဖြစ်ပေမဲ့ လင်ဖြစ်သူ ကိုကျင်လွန် အတွက်တော့ အနှစ်နှစ်ဆယ်ခန့် ပေါင်းလာရသော မိန်းမဖြစ်သဖြင့် အီနေပြီဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံမှသာ လုပ်ဖြစ်တော့သည်။ အပြင်မှာ စမောဆွဲနေပြီး အလုပ်ကိစ္စအကြောင်းပြကာ မကြာခဏလဲ ခရီးထွက်တတ်သေးသည်။ ဒီတော့ ဒေါ်သီသီစိုးလည်း သူဌေးကတော်များစုကာ ဖဲရိုက်ခြင်း၊ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း၊ အပျော်ခရီးထွက်ခြင်းများဖြင့်သာ စိတ်အပန်းဖြေနေရသည်။ ဒီနေ့လည်း သင်္ဘောကပ္ပတိန်ကတော် ဒေါ်မြတ်မြတ်အိမ်မှာ ဖဲဝိုင်းရှိသည်။
ဒီတော့ဒေါ်သီသီစိုးလည်းအပြင်ထွက်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ သူမဘော်လီကို လဲရင်း နောက်ဘက်က ချိတ်ကိုချိတ်မရ ဖြစ်နေသည်။ ငါ့တူရေလာဦး… ကျော်ခိုင်ကား အခန်းထဲဝင်လာသည်။ ဒေါ်လေး ဘော်လီချိတ်တွယ်ပေးစမ်းပါ…. ကျော် ခိုင်ကား ဒေါ်လေးရဲ့အပေါ်ပိုင်းအလှကြောင့် ဘော်လီချိတ်တွယ်ပေးရာမှာ တုန်ယင်နေသဖြင့် ခက်ခက်ခဲခဲတွယ်ပေးလိုက်ရသည်။ ဒေါ်သီသီစိုး ထိုင်ရာမှထပြီး သူ့ရှေ့တွင် ထမိန်လှဲနေသည့်အချိန်မှာ သလုံးသား တုတ်တုတ်ဝင်းဝင်းများကို မြင်လိုက်ရသည့် အခိုက်အတန့်ကား သူ့ရင်ကို ဖိုသွားစေသဖြင့် မျက်နှာလွဲပြီး အခန်းထဲမှထွက်ခဲ့တော့သည်။ ဖဲကလဲဟယ်… သစ်တောအရာရှိကတော် ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးအိက ဖဲကိုပွတ်လိုက်ပြီးအသာချကာ ဘေးမှလက်ဖက်သုပ်ပန်းကန်ကိုယူကာ တစ်ဇွန်းစားလိုက်ပြီး… ၀ိုင်းကို ကြည့်ကာ… အခုမှ သတိထားမိတယ်..ဒီနေ့ နုနုငယ် မလာပါလား။ ဒေါ်နုနုငယ်ဆိုသည်မှာလည်း အရာရှိကတော်တစ်ယောက်ပင်။ ဒေါ်မြတ်မြတ်က ဖဲကိုအသာချလိုက်ပြီး ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးအိပြန်ချထားလိုက်သော လက်ဖက်သုပ်ပန်းကန်ကို ဆွဲယူပြီး စားလိုက်ရင်း… ညဉ်းမသိသေးဘူးထင်တယ်… သူ့ယောင်္ကျားမရှိဘူးလေ…ဒီနေ့။ ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးအိ၊ ဒေါ်သီသီစိုးအပါအ၀င် အခြားမိန်းမများက ဒေါ်မြတ်မြတ်စကားကြောင့်ထူးဆန်းသွားသည်။ ပြောပါဦး သူ့ယောင်္ကျားမရှိရင် ပိုတောင်လာဦးမယ်။ ခစ်ခစ်…အဲ့ဒါကြောင့် ညဉ်းတို့တွေညံ့တယ်လို့ပြောတာ… ဒေါ်မြတ်မြတ်ကတိုးတိုးလေးပြောလိုက်သည်… ဟာ..မိန်းမတွေအုပ်စု မှ အသံတွေထွက်လာပြီး ဖဲပင်မရိုက်နိုင်တော့။ စိတ်ဝင်စားသွားပြီလေ…ဒေါ်မြတ်မြတ်ပြောသောအကြောင်းကို။ ထင်ရဘူးနော်…နုနုငယ်တို့ ဒါကြောင့်မို့ သူ့ဒရိုင်ဘာလေးကို မောင်လေးမောင်လေးနဲ့ တသသဖြစ်နေတာကိုး။ ကောင်လေးကလည်း အချောလေးဟ။ ခစ်ခစ်…နင်ကအားကျနေတယ်ပေါ့….ဒေါ်မြတ်မြတ်ကို ဒေါ်သီသီစိုးကစလိုက်သည်။ အဟင်းဟင်း…ညဉ်းရောဘာထူးလို့လဲ…ညဉ်းတူကိုကြံစည်နေတာမဟုတ်လား…။ အမလေးလေး..မိုးကြိုးတွေပစ်ချကုန်ပါမယ်….အဒေါ်နဲ့တူကို.. ဟင်းဟင်း..ညဉ်းနော်ညဉ်း..သီသီစိုး ညဉ်းအကြောင်းမသိတာကျနေ ငါ့တူငါ့တူနဲ့ ၀မ်းကွဲဘဲတော်တာကို ညဉ်းစားဖို့သောက်ဖို့ ကြံနေတာမသိဘူး မှတ်နေလား။ အို..ညဉ်းတို့နော်စွပ်စွပ်စွဲစွဲ….. ဟင်း.ဟင်း ငြင်းထားဦးပေါ့…၀မ်းကွဲဘဲတော်တာ…တူအရင်းလိုချစ်ဟန်ဆောင်ပြနေတာမသိဘူးမမှတ်နဲ့။ နောက်မှ ညဉ်းတစ်ယောက်ထဲ ခိုးစားလို့ကတော့ နာပြီသာမှတ်။ ငါတို့ပါစားမှာ ညဉ်းတူကို။ ဒေါ်မြတ်မြတ်က ခပ်တည်တည်ဖြင့်ပြောလိုက်သည်။ သူမတို့ အရွချင်းဆိုတော့ အချင်းချင်းအကြောင်းသိနေကြသည်။ မြွေမြွေချင်းခြေမြင်ကြတယ်လေ။ ဟုတ်…တယ်..ဟဲ့..ဟုတ်တယ်..ကျေနပ်ပလား။ သီသီစိုးလည်း ရှက်ရှက်ဖြင့် အော်ပြောလိုက်တော့သည်။ သူမတို့ မိန်းမတစ်သိုက်ရီသံကား အခန်းထဲမှ ပျံ့လွင့်သွားတော့သည်။ ရော့ သင်းသင်း နင့်ဆီကငှားထားတဲ့ စာအုပ်။ ကျော်ခိုင်ပေးလာသောစာအုပ်ကို သင်းသင်းမင်းက ယူလိုက်သည်။ မနေ့ညက စာကျက်ရင်းသူမဆီကငှားထားသောအင်္ဂလိပ်စာအုပ်။ ကိုကိုက ဘယ်သွားမလို့လဲ။
ဟိုဖက်ရပ်ကွက်ထဲက အောင်မော်တို့ဆီခဏ။ ကျောင်းပိတ်ရက်ဖြစ်သဖြင့် သင်းသင်းမင်းက အိမ်မှာ အေးအေးဆေးဆေးစာကျက်နေသည်။ ကျော်ခိုင်လည်း ခါးကြားမှာထိုးထားသော စာအုပ် ပြုတ်ကျသွားသည်ကို မသိလိုက်။ မနေ့ကအောင်မော်ဆီမှငှားထားသော အပြာစာအုပ်(၂)အုပ်။ ဒီနေ့ အသစ်လဲဖတ်ရအောင်လို့ အောင်မော်ဆီ သွားမလို့ဖြစ်သည်။ သင်းသင်းမင်းက စာကျက်ရင်းပျင်းလာသဖြင့် အိမ်ထဲဝင်ရန်ပြင်လိုက်သည်။ ဟင်…ဘာစာအုပ်လေးပါလိမ့်။ ကိုကို ကျထားခဲ့တာဖြစ်မည်…နမော်နမဲ့နဲ့။ စာအုပ်ကသေးသေးပါးပါးလေးပင်။ ဘာစာအုပ်လဲမသိ။ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ဖတ်ကြည့်ဦးမှ ဆိုပြီး အခန်းထဲဝင် ကုတင်ပေါ်လှဲကာ စာအုပ်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်သည်။ ဖတ်ကြည့်ရင်း ဖတ်ကြည့်ရင်း… ဟင်..ဒါ..ဒါလို့ သူမရေရွက်လိုက်သည်။ ဟွန်း…ကိုကုိုအကျင့်မကောင်းဘူးလို့ သူမရေရွက်လိုက်သည်။ သူမသူငယ်ချင်းမတွေ တစ်ခါတစ်လေ ဖတ်ဖတ်နေသော အပြာစာအုပ်တွေ။ အရွမတွေပီပီ ဘယ်ကနေဘယ်လိုရလာမှန်းမသိ။ ဆက်မဖတ်ဘူးလို့ သူမစဉ်းစားလိုက်ပေမဲ့ ဆက်ဖတ်ချင်စိတ်ကို တားမရသောကြောင့် သူမဆက်ဖတ်လိုက်သည်။ စိတ်ထဲမှာ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းမရိုးမရွဖြစ်လာပြီး သူမပေါင်ခြံကြားမှာ ယားကျကျိဖြစ်လာသည်။ အရည်ကြည်လေးတွေစိမ့်ထွက်လာတာဖြစ်မည်။ အပျိုဖြစ်နေပြီဖြစ်သော သူမအဖို့ စိတ်လွုပ်ရှားလာသည်မှာမဆန်း။ ကိုကိုကျော်ခိုင်ကို သူမမြင်လာသည်။ ကိုကိုကျော်ခိုင်ကား သူမနှင့်နှစ်ဝမ်းကွဲမောင်နှမဖြစ်နေပြီ။ ဒါကြောင့် ယူလို့ရတယ်လို့ သူမတွေးနေမိသည်။ ယောင်္ကျားပီသသော ကိုကို့ကို သူငယ်ချင်းမတွေက ကြိုက်လိုက်တာ အသည်းအသန်။ သူမအနေဖြင့်မနာလိုဖြစ်မိသည်။ ယောင်းမလို့ ခေါ်လျှင်ပင်သူမ သ၀န်တိုမိသည်။ ကိုကိုရယ်…ညီမလေးကို ရှိတယ်လို့တောင်မထင်ဘူးလို့လဲသူမတွေးနေမိတယ်။ ဒီစာအုပ်ကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ…. မထူးပါဘူး ကိုကိုမသိအောင် သူမဘဲ ဖွတ်ထားလိုက်တာကောင်းတယ်။ နို့မို့ဆိုကိုကိုရှက်သွားလိမ့်မယ်လို့ သူမတွေးမိပါတယ်။ ဒါကြောင့်စာအုပ်ကို အိပ်ယာအောက်ထဲ ထိုးထည့်ပြီး ဖွတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ ဟိုက်… ကျော်ခိုင်ခေါင်းနားပန်းကြီးသွားသည်။ သူ့ခါးကြားမှာထိုးခဲ့သော အပြာစာအုပ်(၂)အုပ်အနက်(၁)အုပ်က ဘယ်မှာကျခဲ့မှန်းမသိ။ သူငယ်ချင်းအိမ်ရောက်ခါနီးမှ ပြန်လှည့်လာရသည်။ သောက်ခွတော့ကျပြီ။ တစ်လမ်းလုံးကလည်းလူရှင်းနေသည်။ သူငယ်ချင်းအိမ်က သူ့အိမ်နှင့်သိပ်မေ၀းသဖြင့် လမ်းတစ်လျှောက်လုံး စေ့စေ့စပ်စပ်ကြည့်လာသော်လည်း ထိုစာအုပ်ကိုမတွေ့။ အိမ်ထဲက နေခြံထဲဆင်းလာသည် အထိ ပါလာသေးသည်။ ဟိုက်..ဒါဆိုဒုက္ခဘဲ ခြံထဲကျခဲ့သည်မှာသေချာသည်။ သူခေါင်းနပန်းပင်ကြီးသွားသည်။ သင်းသင်းမင်းတွေ့သွားလို့ ကတော့ သူဒုက္ခရောက်ပြီ။ ခြံထဲဝင်တော့ သင်းသင်းမင်းက သူမထိုင်နေသည့်နေရာမှာမရှိတော့။ သင်းသင်းမင်းအိမ်ပေါ်တက်သွားတာဖြစ်မည်။ သူလည်းအပြေးအလွားပင်အိမ်ထဲဝင်ခဲ့သည်။ ဒေါ်လေးကလည်း အိမ်မှာမရှိ. ။ သူမမိတ်ဆွေတွေအိမ်ဖဲရိုက်သွားသည်။ သူလည်း အပေါ်ထပ်သို့တက်ပြီး .. သင်းသင်းမင်းအခန်းရှိရာကို သွားလိုက်သည်။ ထိုအချိန်တွင် သင်းသင်းမင်းကား တစ်အိမ်လုံးလူမရှိသဖြင့် အိပ်ယာအောက်ထိုးထည့်ထားသော စာအုပ်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ချင်လာသဖြင့် တစ်ကျော့ပြန်စိမ်ပြေနပြေဖတ်နေချိန်တွင် သူ့ကိုကိုကျော်ခိုင် မမေးမမြန်းဝင်လာချိန်နှင့်တန်းတိုးသည်။ မဖတ်နဲ့..ညီမလေးအဲ့စာအုပ်..အကို့ဆီပေးစမ်း..။ သင်းသင်းမင်းကားရုတ်တရက်မို့ကြောင်အမ်းသွားသော်လည်း… စာအုပ်ကို သူမခါးအောက်သို့အလျှင်အမြန်ထိုးထည့်လိုက်သည်။ ကျော်ခိုင်က ကုတင်ပေါ်တက်ပြီး သင်းသင်းမင်းခါးအောက်က စာအုပ်ကိုဆွဲလု၊ သင်းသင်းမင်းက မပေးဘဲရုန်းကန်နေရင်း၊ ကျော်ခိုင်ကား အမှတ်မထင် သင်းသင်းမင်းအပေါ်သို့ ထပ်ရက်ကြီးဖြစ်သွားကာ သင်းသင်းမင်းကို ဆွဲဖက်မိလိုက်သလိုဖြစ်သွားသည်။ နူးညံ့အိစက်လှသော ညီမ၀မ်းကွဲ သင်းသင်းမင်း၏ ရင်အစုံကားသူ့ရင်အစုံနှင့်ဖိကပ်သွားသည်။ သူ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့ဖြစ်သွားမှန်းမသိ။ ကိုကို မကောင်းဘူးကွာ..လို့သင်းသင်းမင်းပြောလိုက်ချိန်မှာဖြစ်သွားတာပါ။ သူမအကြည့်ကတစ်မျိုးပါဘဲ. .နွုတ်ခမ်းလေးတွေကလည်း တစ်ဆတ်ဆန်တုန် နေတာပါ။ ကျော်ခိုင်က သင်းသင်းမင်းမျက်နှာလေးကို ကြောင်တောင်တောင်ငုံ့ကြည့်ရင်း သူ့စိတ်တွေဖောက်ပြန်သွားပါတယ်။ သင်းသင်းမင်းရဲ့နွုတ်ခမ်းလေးကိုသူစုပ်နမ်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ သင်းသင်းမင်းရဲ့ လက်တွေကလည်း သူ့ကျောကိုဖက်တွယ်လာပါတယ်။ သူ့လီးကြီးကလည်း အလိုလိုမာတောင်နေပြီး သင်းသင်းမင်းရဲ့ ထမိန်အပေါ်ကနေ သင်းသင်းမင်းရဲ့စောက်ပတ်အကွဲကြောင်းလေးမှာ ထိကပ်နေပြီး ရှိန်းတိန်းတိန်းကြီးဖြစ်နေပါပြီ။ နှစ်ဦးသားစကားတစ်လုံးမှ မပြောဖြစ်ဘဲ အပြန်အလှန် နမ်းရွုပ်နေကြရင်း ကျော်ခိုင်လက်ကလည်း သင်းသင်းမင်းရဲ့ထမိန်ကို ချွတ်ချလိုက်သလိုသင်းသင်းမင်းကလည်း ကျော်ခိုင်ပုဆိုးကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပါတော့တယ်။
နှစ်ဦးသားရာဂစိတ်မွန်နေကြတဲ့အတွက် အခုအချိန်မှာအဲ့ဒါကလွဲပြီးဘာမှမရှိပါဘူး။ ကျော်ခိုင်ကလည်း မိန်းမမလိုးဖူးတာကြောင့် အတွေ့အကြုံကမရှိပါဘူး။ သူ့လီးကြီးကို သင်းသင်းမင်းအဖုတ်ထဲကို တေ့ပြီးထိုးထည့်ကြည့်နေပါတယ်။ အ..အ..ကိုကို..ညီမလေးဟာကွဲပြီထင်တယ်.. အပျိုစစ်စစ်လေးဖြစ်တာကြောင့် သင်းသင်းမင်းရဲ့အဖုတ်လေးဟာအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ကြီးနေတဲ့ ကျော်ခိုင်လီးကြီးကို ရုတ်တရက်လက်ခံဖို့ ခက်ခဲနေတာကြောင့် ကျော်ခိုင်လည်း ချော့သွင်းနေရပါတယ်။ သူလည်းစားတော့မစားသာပါဘူး သင်းသင်းမင်းရဲ့စောက်ခေါင်းကျပ်ကျပ်ရဲ့ ညှစ်အားကြောင့် သူ့လီးကိုပြုတ်တူနဲ့ညှစ်ထားသလိုပါဘဲ။ ဒါကြောင့်အားစိုက်ပြီး ဆောင့်ထည့်လိုက်ရာ ဖော့တုံးလိုနူးညံ့တဲ့အရာလိုနဲ့ သူ့လီးထိပ်ဖျားနဲ့ထိကပ်သွားချိန်မှာ သင်းသင်းမင်းမျက်ရည်လေးဝိုင်းသွားပါတယ်။ စောက်ပတ်မှာရှိတဲ့အပျိုစင်အမြေးပါးလေးကို ကိုကိုကျော်ခိုင်ရဲ့လီးကြီးကထိုးခွဲသွားတာကိုး။ အရမ်းနာသွားလားညီမလေး…ကျော်ခိုင်အမေးကို သင်းသင်းမင်းကမျက်ရည်လေးကလယ်ကလယ်နဲ့… အရမ်းတော့မနာပါဘူးကိုကိုလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ သူမလက်တွေကလည်းကျော်ခိုင်ရဲ့ ကျောကိုမမီမကမ်းဖက်ထားပါတယ်။ လုပ်..လုပ်ပါတော့ကိုကို..ညီမလေးခံနိုင်ပါတယ်။ သင်းသင်းမင်းစကားဆုံးတာနဲ့ ကျော်ခိုင်ကလည်းသင်းသင်းမင်းအဖုတ်လေးကို သူ့လီးကြီးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ဆောင့်လိုက်လုပ်ပါတော့တယ်။ အစကတော့ သင်းသင်းမင်းအနေနဲ့ နာကျင်သယောင်ခံစားရပေမဲ့ အချိန်အနည်းငယ်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပိုကောင်းလာပြီး ကျော်ခိုင်ဆောင့်ချ လိုက်တိုင်း သူမကလည်းအောက်ကနေကော့ကော့ပေးလာပါတယ်။ အအ..ဆောင့်ပါ..ကိုကို..မရပ်ပါနဲ့ .. စွပ်ဒုတ်…အအ…သင်းသင်းကားကျော်ခိုင်ကိုဖက်ထားသောလက်တွေပြုတ်ကျသွားပြီး မွေ့ယာစတွေကိုသူမလက်နဲ့ကုတ်ခြစ်နေပါတယ်။ သူမခေါင်းကလည်း ဘယ်ညာယမ်းခါနေပါတယ်။ ကျော်ခိုင်ကလည်း သူဇာတ်ကားထဲတွေမှာမြင်နေကျအတိုင်း သင်းသင်းမင်းရဲ့ ခြေထောက်ကို သူ့ပုခုံးပေါ်ထမ်းတက်ပြီး သူ့လီးကို သင်းသင်းမင်းရဲ့အဖုတ်ကျပ်ကျပ်စီးစီးလေးထဲ လိုးကောင်းကောင်းနဲ့လိုးနေပါတယ်။ ငယ်ရွယ်သူတွေ ဖြစ်တာရယ်.. အတွေ့အကြုံမရှိတာရယ်ကြောင့် ကျော်ခိုင်အချက်(၅၀)လောက် အရောက်မှာ ကျော်ခိုင်လီးထိပ်ဖျားက ကျင်ခနဲဖြစ်သွားပြီး လရေတွေပန်းထွက်ကုန်ပါတယ်။ သင်းသင်းမင်းက ကျော်ခိုင်ဆောင့်ချက်(၄၀)လောက်ကတည်းက တစ်ချီပြီးသွားခဲ့ပါပြီ။ ကျော်ခိုင်က သင်းသင်းမင်းစောက်ဖုတ်ထဲကလီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ သင်းသင်းမင်းစောက်ဖုတ်ထဲက သူ့လရေတွေနဲ့စောက်ရည်တွေ အန်ကျလာပါတော့တယ်။ သူလည်း ခဏအမောဖြေလိုက်ပါတယ်။ သင်းသင်းမင်းနဲ့သူနဲ့ဟာအမှတ်မထင် ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့ပါပြီ။ နောက်ထပ်လုပ်ဦးမှာလားကိုကို… လုပ်ချင်လုပ်လေ…သင်းသင်းကတော့ရတယ်လို့..သင်းသင်းမင်းပါးစပ်ကစကားထွက်လာတော့ သူ့လီးကြီးက အလိုလိုပြန်မာလာပါတယ်။ ယခုမှ ညီမ၀မ်းကွဲသင်းသင်းမင်းကလည်း အမေတူသမီးပီပီတဏှာကြီးမှန်း သူသိလိုက်ရပါတယ်။ ဟင်း..ဟင်း..ညီမလေးကတကယ်ခံနိုင်လို့လား..။ ဟွန်း..ကိုကိုသာတစ်ညလုံးလိုး…ညီမလေးကတစ်ညလုံးခံမှာသိလား။ သင်းသင်းမင်းပါးစပ်ကနေ သူ့စကားထက်သာတဲ့စကားလုံးတွေပါ ထွက်ကျလာပါတယ်။ ညီမလေးရဲ့စကားကိုကြားတာနဲ့ကျော်ခိုင်ကလည်းမနေပါဘူး။ စိတ်ပိုမိုတက်ကြွလာပါတယ်။ လီးကိုအဖုတ်ထဲကနေ အဖျားထိဆွဲထုတ်လိုက် တရှိန်ထိုးဆောင့်လိုက်နဲ့ ဇိမ်တွေ့နေပါတော့တယ်။ ပလွတ်။ ပလွတ်..ဘတ်ဘတ်.ဘောက်ဘောက်…အ.အ အချက်(၁၀၀)လောက်ရောက်တဲ့ အခါမှာတော့ ညဉ်းညူသံထွက်ပေါ်လာပြီး အရည်တွေထွက်ကျကုန်ပါတယ်။
သင်းသင်းမင်းဆီကတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျော်ခိုင်ဆီကပါ။ သင်းသင်းမင်းရဲ့ တင်းကျပ်လှတဲ့စောက်ပတ်ရဲ့ညှစ်အားဒဏ်ကို သူ့လီးကကောင်းလွန်းနေလို့မခံနိုင်ဘဲ နောက်တစ်ချီပြီးသွားတာပါ။ သင်းသင်းမင်းကတော့ မပြီးသေးပါဘူး။ သူမကတန်းလန်းကြီး ဟပ်ကော့ကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။ ကျော်ခိုင်လီးကြီးကအနည်းငယ်ပျော့သွားပါတယ်။ ကျော်ခိုင်ကသင်းသင်းမင်း ဘေးမှာလဲလိုက်ပြီး အမောဖြေနေပါတယ်။ ဟွန်း…ကိုကိုကလည်း…နည်းနည်းလေးတောင်မစောင့်ဘူးနော်။.ညီမလေးကို…. ညီမလေးအဖုတ်ကလိုးလို့အရမ်းကောင်းလွန်းလို့ပါညီမလေးရယ်…။ မရဘူးနော်ကိုကို…နောက်ထပ်လုပ်ပေးရမယ်… သင်းသင်းမင်းကကျော်ခိုင်လီးကြီးကိုကိုင်ရင်းစိတ်ကူးတစ်ခုပေါက်သွားသည်။ ကိုကိုမျက်လုံးခဏမှိတ်လိုက်ပါလား။ ဘာဖြစ်လို့လဲ..ညီမလေး…. သင်းသင်းမင်းက ကျော်ခိုင်ကို နွုတ်ခမ်းစူကာကြည့်ရင်း ပြီးရင်သိမှာပေါ့ကိုကိုရယ် မှိတ်မှာသာမှိတ်ထားမျက်လုံးကို…. ကျော်ခိုင်လည်း သင်းသင်းမင်း ဘာလုပ်မည်ကိုမသိဘဲမျက်လုံးမှိတ်ထားလိုက်သည်။ သင်းသင်းမင်းရဲ့လွုပ်ရှားမွုကညင်သာသည်။ သူ့လီးကို သူမလက်ဖြင့် ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆုပ်ကိုင်လိုက်တာ ခံလိုက်ရပြီးနောက် သူ့လီးထိပ်ဖျားတွင်ပူနွေးစိုစွတ်သော နူးညံ့ကာ ကျဉ်တက်သွားသည့် ခံစားမွုကို ခံစားလိုက်ရသည်။ မျက်လုံးကိုဖျက်ခနဲဖွင့်လိုက်တော့.. သူ့လီးချောင်းကြီးကိုသင်းသင်းမင်းက ပါးစပ်ထဲထည့်ငုံကာ ပတ်ပတ်လည် စုပ်ပစ်သည်ကို သိလိုက်ရသည်။ အိုး…အိုး. .ကျော်ခိုင်ခါးများပင်ကော့တက်သွားသည်။ လီးစုပ်ပေးတာကို ဇာတ်ကားများထဲသာမြင်ဖူးပြီး လက်တွေ့မခံဘူးသောသူ့အဖို့ ညီမလေးသင်းသင်းမင်းရဲ့ လီးစုပ်ချက်များကြောင့် မျက်ဖြူပင်လှန်ချင်သွားသည်။ လီးကြီးကလည်း တစ်ဆတ်ဆတ် ထောင်လာသည်။ ကောင်းလွန်းသဖြင့်သင်းသင်းမင်းခေါင်းမှဆံပင်များကြားထဲသို့လက်များကို ထိုးထည့်ကာ ပွတ်ပေးပြီး အလိုက်သင့် ရှေ့တိုးနောက်ငင်ပြုပေးနေမိသည်။ သင်းသင်းမင်းက ကိုကိုကျော်ခိုင်လီးကြီးကို ပါးများချိုင့်သွားအောင်ပင် စိတ်ပါလက်ပါပင် စုပ်ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဆက်တိုက်စုပ်လိုက်တော့ ကိုကို့လီးကြီးက ရော်ဘာတုတ်သဖွယ်ဖြစ်လာချေပြီ။ ပြွတ် ညီမလေးသင်းသင်းက သူမပါးစပ်ထဲမှ သူ့လီးကြီးကိုပြန်ထုတ်လိုက်မှသာ ကျော်ခိုင်သက်ပြင်းချနိုင်တော့သည်။ ဒီကောင်မလေး မလွယ်ဘူး ပလွေမွုတ်တာတော်တော်ကျွမ်းပါလား အတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘဲနဲ့။ ဟူး…ကောင်းလိုက်တာညီမလေးရယ်… ဘယ်လိုတတ်နေတာလဲ ဒီပညာတွေ ခစ်ခစ်ကိုကိုကလည်း.. မေမေကဖေဖေကြီးကိုဒီလိုလုပ်ပေးနေကျ။ ဖေဖေကြီးပြန်လာတဲ့နေ့တွေဆို အိပ်ခန်းထဲမှာလေ…။ မေမေက ဖေဖေကြီးကိုအဲ့လိုအမြဲလုပ်ပေးတာ ညီမလေးကချောင်းနေကျ။ ဟင်…သူမစကားကြောင့် ကျော်ခိုင်တစ်ခုတော့သိလိုက်သည်။ ဒေါ်လေးကလီးစုပ်တာပိုမိုကျွမ်းကျင်သည်ဆိုတာကိုပင်။ တကယ်ပြောနေတာလားညီမလေး….။ ခစ်ခစ်..ကိုကိုကမယုံလို့လား…ပြီးတော့ရှိသေးတယ်။
မေမေ့ဟာကိုလေ ဖေဖေကြီးကယက်ပေးတာသိလား။ ဟု…ကျော်ခိုင်လည်တနင်နင်ပင်ဖြစ်သွားသည်။ံမေမေဆို တွန့်လိန်နေတာဘဲကိုကိုရဲ့ ကောင်းလို့။ အော်လည်းအော်သေးတယ် တအီးအီးတအားအားနဲ့..ခိခိခိ။ သင်းသင်းမင်းသည် ပြောရင်းအနည်းငယ် ရှက်သွားသဖြင့်စကားစရပ်လိုက်သေးသည်။ ကိုကို့ဟာကြီးက မာနေပြီလေ..ကိုကိုလို့ ခေါင်းလေးငုံ့ရင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။ သင်းသင်းမင်းလိုချင်နေပြီဆိုတာကျော်ခိုင်သိလိုက်တဲ့အတွက်…။ ညီမလေးလေးဖက်ထောက်လိုက်ပါလား။ ကိုကိုနောက်ကနေလိုးမယ် လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါ။ သင်းသင်းမင်းကလည်း ခေသူမဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုကိုသူမကို လေးဖက်ထောက်လိုးတော့မယ် ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါတယ်။ လေးဖက်ထောက်လိုးတဲ့ ပုံစံကိုသူမအရမ်းသဘောကျတာနဲ့လည်းအတော်ဘဲပေါ့။ ဒါကြောင့် လေးဖက်ထောက်ပြီး ဖင်လုံးလုံးကျစ်ကျစ်လေးကို ထောင်ပေးထားပါတယ်။ တင်းရင်းပြီးကျစ်လျစ်နေတဲ့ သင်းသင်းမင်းရဲ့ဖင်လုံးလုံးလေးကိုထောင်ပေးထားတာ ကြည့်ပြီး ကျော်ခိုင်ကလည်း တယမ်းယမ်းဖြစ်နေတဲ့သူ့လီးကြီးကို ဖင်နှစ်ခြမ်းကြားမှာပြူထွက်နေတဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို တေ့ပြီးဒစ်မြုတ်ရုံမြုပ်ထားကာ ပွတ်ဆွဲလိုက်ပါတယ်။ အအ…ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲကိုကိုရယ်…။ လိုး..လိုးပေးပါတော့… အရည်တွေရွဲကျနေပြိး ဖင်လေးတွန့်လိန်နေတာကိုကြည့်ပြီး ကျော်ခိုင်က မလိုးသေးပဲ..သင်းသင်းရဲ့စောက်စိလေးကို သူ့လီးထိပ်ဖျားနဲ့ ပွတ်ဆွဲပေးတဲ့အခါမှာ… အအ….ခံချင်လှပြီကိုကိုရယ်…လိုး..လိုးပေးပါတော့။ ညီမလေးတောင်းပန်ပါတယ်။ စွပ် ဒုတ်…အအ… သင်းသင်းမင်းဖင်လေးပင် ဆောင့်ချလိုက်သည့်အရှိန်ကြောင့်တုန်သွားသည်။ ကိုကိုကျော်ခိုင်လက်က သူမခါးသိမ်သိမ်လေးကို ဆုပ်ကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ငယ်ဖြင့် အပီကိုလိုးတော့သည်။ ဒုတ်..ဒုတ်..အအ.. သားအိမ်ကိုပင်ထောက်မိသလားပင်အောက်မေ့ရသည်။ ကိုကိုလီးကြီးက သူမစောက်ဖုတ်ထဲတစ်ဆုံးမြုပ်ဝင်သွားတိုင်း သူမဖင်အဖုတ်နှင့် ကိုကို့လဥနှစ်လုံးက တစ်ဘတ်ဘတ် ရိုက်နေသလို သူမတင်ပါးနှင့်ကိုကို့ပေါင်တံများကလည်းရိုက်ခတ်ပြီး သူမဖင်သားလေးတွေတုန်ုတုန်သွားသလို လေးဖက်ကုန်းထား သဖြင့် အောက်သို့ကျနေသော နို့များကလည်းယမ်းခါသွားသည်။ ယိမ်းယိုင်သွားသောကြောင့် သူမဆံနွယ်များကလည်းမျက်နှာပေါ်ကျနေသည်။ ကျော်ခိုင်အဖို့လည်း သင်းသင်းမင်းဖင်လေးတုန်တုန်သွားတာကိုက လိုးရတာကောင်းနေသည်။ သင်းသင်းမင်းကလည်း အစွမ်းကုန်ကို ထောင်ပေးထားသဖြင့် သူ့လီးကိုအောက်သို့စိုက်စိုက်ချပြီးလိုးရတာကိုက အရသာရှိလှသည်။ စွပ်စွပ် ပြွတ်ပြွတ်..ပလွတ်ပလွတ် စောက်ပတ်နှင့် လီးထိတွေ့သံတွေ ကလည်း အဆက်မပြတ်ဆူညံနေသည်။
အိုးအိုး..အအ…လိုးလိုးကိုကို…အအ.ညီမလေးကောင်းနေပြီ…ကိုကိုအားရပါးရသာဆောင့်ပါကိုကို…အအ..စွပ်စွပ်..ပြွတ်ပြွတ်…အား..အင်း သင်းသင်းမင်းကယောင်ကတမ်းတွေညဉ်းညူနေသည်။ စွပ်စွပ်…ကျော်ခိုင်လည်းပြီးခါနီးသဖြင့် အစွမ်းကုန်ဆောင့်တော့သည်။ ကုတင်ကြီးမှတကျီကျီအသံများပင်ထွက်ပေါ်လာသည်။ အအ..ကျော်ခိုင်လီး မှ လရေများက သင်းသင်းမင်းရဲ့ အရည်တွေရွဲနေပြီးနူးညံ့စိုစွတ်လှသောစောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ဖြန်းပက်လိုက်ချိန်တွင် သင်းသင်းမင်းရဲ့ လည်ပင်းကြောများပင်ထောင်ထလာက အသားကုန်အော်ဟစ်လိုက်ပြီး ကျော်ခိုင်လီးကို စောက်ပတ်ဖြင့်ညှစ်သလို ခံစားလိုက်ရပြီး ပြေလျော့သွားကာ သူမလည်း စောက်ရေတွေထွက်ကျသွားချေပြီ။ ကျော်ခိုင်ကလီးကိုဆွဲနွုတ်လိုက်ပြီး သူမဖင်ကြားတွင် လီးချောင်းကြီးကိုတင်ကာ အမောဖြေနေချိန်တွင် သင်းသင်းမင်း စောက်ပတ်ထဲမှ သူ့လရေများနှင့်သင်းသင်းမင်းစောက်ရေများက မွေ့ယာပေါ်သို့ စီးကျကုန်လေသည်။ သူလည်း မှောက်ခုံကြီး ညီမလေးသင်းသင်းမင်းအပေါ်သို့ထပ်ရက်ကြီးကျသွားကာ သင်းသင်းမင်း၏ လည်တိုင်များကို တရွုးရွုးနှင့်နမ်းကာ နူးနပ်ပေးနေပါတော့တယ်။ သင်းသင်းမင်းကို လိုးကောင်းတာကြောင့် ဒေါ်လေးပြန်မရောက်မချင်း လိုးပစ်ဖို့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ဒေါ်သီသီစိုးတစ်ယောက် ဖဲရိုက်ရန်အတွက် ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးအိ အိမ်သို့မနက်ကတည်းကထွက်သွားချေပြီ။ ဒီအချိန်ကို စောင့်နေသော ကျော်ခိုင်နှင့် သင်းသင်းမင်းကလည်း အိမ်တံခါးများပိတ်ပြီး လိုးပွဲဆင်နွဲကြတော့သည်။ ကျော်ခိုင်ကား အပြာစာအုပ်များ အပြာကားများမကြည့်ဖြစ်တော့။ ဒေါ်လေးမရှိသည့် အချိန်တွင် ညီမ၀မ်းကွဲဖြစ်သူ သင်းသင်းမင်းနှင့် လင်မယားလုပ်တမ်းသာကစားတော့သည်။ နှစ်ဦးသားကား အပြာကားများ အကြည့်များခဲ့ကြသဖြင့် အပြာကားထဲက နည်းများအတိုင်း တစ်နေ့တစ်မျိုးမရိုးရအောင်လိုးကြသည်။ ကျော်ခိုင်ကလည်း သင်းသင်းမင်း၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင် ဘယ်နေရာမှာ မှဲ့ဘယ်နှစ်လုံးရှိသည်ကအစအလွတ်ရနေပြီဖြစ်သလို သင်းသင်းမင်းကလည်း သူ့အကိုကျော်ခိုင်ရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးအလွတ်ရနေသည်။
နှစ်ဦးသားနည်းပေါင်းစုံကိုစမ်းသပ်ပြီး လိုးကြသည်။ ဘာဂျာမွုတ်နည်း ပလွေမွုတ်နည်းများကိုလည်း စမ်းနေကြဆိုတော့။ သူ့အကိုကျော်ခိုင်ရဲ့ လီးဘယ်လောက်အရှည်ရှိသည် ဘယ်လောက်ကြီးသည် ဆိုတာကို သင်းသင်းမင်း အလွတ်ရသလို သင်းသင်းမင်းရဲ့စောက်ပတ် သဏ္ဌာန်ကို သူ့အကိုကျော်ခိုင်လျှာကအလွတ်ရနေပြီ။ ဒီနေ့လည်းလိုးပွဲမစခင် ထုံးစံအတိုင်း သင်းသင်းမင်းက အပေါ်ဘက်မှာ သူ့အကိုကျော်ခိုင်မျက်နှာပေါ်မှာ သူမပေါင်ခွထားပြီး သူမမျက်နှာက ကိုကိုကျော်ခိုင်ပေါင်ခွကြားမှာ။ သူမတို့နှစ်ဦးအပြိုင်အဆိုင် ဘယ်သူပြီးပြီး အမွုတ်ပြိုင်နေကြသည်။ သင်းသင်းမင်းရဲ့ စောက်ပတ်ကိုကျော်ခိုင်ကလက်ဖြင့်ဖြဲပြီးစောက်စိလေးကို လျှာဖြင့်ချွန်ကာတေ့ပြီး ဖိဖိဝိုက်ဝိုက်ယက်ပေးသဖြင့် သင်းသင်းမင်း လူးခါနေသလို…သင်းသင်းမင်းရဲ့ လီးစုပ်ပေးမွုကလည်း ကျော်ခိုင်ရဲ့ဒစ်ကြီးကိုနွုတ်ခမ်းဖြင့်ဖိကာ လီးထိပ်အပေါက်လေးကို လျှာဖြင့်ကစားနေသဖြင့် ကျော်ခိုင်လည်းဇောချွေများပြန်နေသည်။ ကာမပန်းတိုင်ကို နှစ်ဦးသား သူနိုင်ကုိုနိုင် အပြိုင်ကြဲနေချိန် ဖဲရိုက်ရန် ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးအိတို့ အိမ်သို့ထွက်သွားသော ဒေါ်သီသီစိုးကလည်း လမ်းတစ်ဝက်မှာ သူမအိမ်မှာ အရေးကြီးပစ္စည်း တစ်ခုကျန်သဖြင့် ကားကိုပြန်လှည့်လာခဲ့သည်။ အိမ်ရောက်တော့ အိမ်တံခါးတွေစေ့ထားသဖြင့် ကျော်ခိုင်တို့သီသီစိုးတို့ လမ်းထဲက သူတို့သူငယ်ချင်းတွေ ထွက်သွားသည်အထင်ဖြင့် အိမ်ထဲသို့ စေ့ထားသောတံခါးများကိုဖွင့်ကာ ၀င်ခဲ့ပြီးနောက်တွင်။ အပေါ်ထပ်သို့ ဒေါ်သီသီစိုးဖြတ်သွားပြီ။ ကျော်ခိုင်အခန်းရှေ့အရောက်တွင် ကြားလိုက်ရသော အသံများကခေါင်းနားပန်းကြီးသွားစေသည်။ ပြတ်.ပြတ်..အအ..ကိုကို..အစိကိုသွက်သွက်လေးစုပ်ပေးပါ.. ညီမလေး..ထွက်ထွက်တော့မယ်.အအ။ သမီးဖြစ်သူ သင်းသင်းမင်းရဲ့ညဉ်းညူသံ။ ထိုအသံကိုကြားလိုက်ကတည်းက သူမသိသွားသည်။ဒါဘာလုပ်နေတဲ့အသံလဲဆိုတာ။ မြင်လိုက်ရသောမြင်ကွင်းက ဒေါ်သီသီစိုးရင်ကိုလွုပ်ခါစေသည်။ သူမစားရန်အတွက် မွေးထားခဲ့သော သူမတူဝမ်းကွဲဖြစ်သူကျော်ခိုင်ကို သူ့ညီမ၀မ်းကွဲ သူမသမီးသင်းသင်းမင်းက လက်ဦးသွားချေပြီ။ သင်းသင်းမင်းပေါင်ခွကြားအောက်မှာ ကျော်ခိုင်မျက်နှာက။ သင်းသင်းမင်း မျက်နှာကလည်း ကျော်ခိုင်ပါင်ကြားမှာ။ သင်းသင်းမင်းစောက်ပတ်ကို ကျော်ခိုင်က လက်ဖြင့်ဖြဲပြီး လျှာဖြင့်ယက်နေသလို။ ကျော်ခိုင်လီးကိုလည်း သမီးဖြစ်သူသင်းသင်းမင်းက စုပ်နေတာကိုမြင်ရတော့ သူမတော်တော်ဒေါကန်သွားသည်။ ဒီလိုလုပ်နေတာကိုခံပြင်းနေတာမဟုတ်။ သူမစားရန်ပြင်ထားသော အစာကို လူလုသွားသဖြင့်ခံစားရသောခံစားချက်မျိုး။ အခန်းတံခါးကို ၀ုန်းဆိုရုတ်တရက်ပွင့်သွားသဖြင့် ရမ္မက်ရေယာဉ်ကြောမှာ စီးမျှောနေသော ကျော်ခိုင်နှင့်သင်းသင်းမင်းကား ကပျာကယာကောက်ထလိုက်တော့လည်းအချိန်မမီတော့။
အမေ…. ဒေါ်လေး..ဒေါ်လေး…။ ဒါဘာလုပ်နေတာလဲပြောစမ်း… ဟို…ဟို..ကျော်ခိုင်ကား မျက်နှာမထားတတ်အောင်ဖြစ်သွားသည်။ အ၀တ်အစားကင်းမဲ့နေသောသူ့အဖို့ လီးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်အုပ်ထားရသလို သင်းသင်းမင်းကလည်း အဖုတ်ကိုလက်ဝါးဖြင့်အုပ်ထားသည်။ ဟို..ကောင်မ…အရှက်ကင်းမဲ့လှချည်လား။ ဖြန်း…ဖြန်း…ကြောက်ပါပြီ မေမေရဲ့…အီးဟီးဟီး သင်းသင်းမင်းဆံပင်များကို ဒေါ်သီသီစိုးက ဆောင့်ဆွဲပြီးပါးတွေကိုလက်ဖြင့်ရိုက်တော့သည်။ ဟိုကောင်…မင်းအဲ့မှာဘဲရပ်နေ..ပြီးမှမင်းကိုဒဏ်ပေးမယ်.။ အမိုက်မ..လာခဲ့စမ်း.. ဒေါ်သီသီစိုးက သင်းသင်းမင်းဆံပင်များကို လက်ဖြင့်လိမ်ဆွဲပြီး ခေါ်သွားသည်။ သင်းသင်းမင်းကတော့တရွက်တိုက်ပါသွားသည်။ အော်ဟစ်ငိုယိုနေသည်။ နောက်တော့အိမ်နောက်ဖက်စတိုခန်းသို့ခေါ်သွားပြီး သင်းသင်းမင်းကို ထိုအခန်းထဲ ထည့်လိုက်ပြီး အပြင်မှသော့ခတ်လိုက်သည်။ မေမေ..သမီးတောင်းပန်ပါတယ်…ဟင့်ဟင့် တံခါးကိုတဘုန်းဘုန်းထုကာ အော်ဟစ်ငိုယိုတောင်းပန်မွုကို ဒေါ်သီသီစိုးဂရုမစိုက်ဘဲ.သော့တံကိုယူကာ အပေါ်ထပ်သို့ပြန်တက်ခဲ့သည်။ အပေါ်ထပ်မှာ တစ်ယောက်ကိုဆုံးမရဦးမယ်လေ။ တံခါးကိုဖွင့်ပြီးဒေါ်လေးသီသီစိုးပြန်ဝင်လာသည့်အချိန်ထိကျော်ခိုင်ကား ရှက်တာရောကြောက်တာရောပေါင်းပြီး အ၀တ်အစားပင်မ၀တ်ဖြစ်သေး။ သူလီးကိုလက်ဝါးဖြင့် အုပ်ကာခေါင်းကြီးငုံ့နေသည်။ ဒေါ်သီသီစိုးက ဒေါသအရှိန်မပြေသေးပါ။ ခေါင်းမော့စမ်း..ကျော်ခိုင်…. ကျော်ခိုင်က မ၀ံ့မရဲဖြင့် ခေါင်းကိုဖြည်းငြင်းစွာမော့လိုက်သည်။ ဖြန်း…သူ့ပါးကိုဒေါ်လေးသီသီစိုးကရိုက်လိုက်သည်။
ဒေါ်လေး…ကျွန်တော်ရှင်းပြ…. မရှင်းပြနဲ့…ငါမကြားချင်ဘူး….နင်မိုက်လှချည်လား။ ကိုယ့်ညီမလေးဆိုပြီးစောင့်ရှောက်ရမဲ့..ဟာကို..နင်ကလေ..နင်က.. တကယ်တော့ သီသီစိုးဒေါကန်နေခြင်းမှာ တခြားကြောင့်မဟုတ်.။ သူမတူဖြစ်သူကျော်ခိုင်က သူမကိုမလိုးဘဲ သူမသမီးသင်းသင်းမင်းကို လိုးနေသည်ကို မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်လိုက်ရသောကြောင့်.. သမီးဖြစ်သူအပေါ်ဝန်တိုစိတ်ရော ကျော်ခိုင်အပေါ် ဒေါကန်စိတ်ရော ပေါင်းသွားခြင်းဖြစ်သည်။ ပြောရရင်တော့ မွန်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ဖယ်စမ်းနင့်လက်.. ကျော်ခိုင်အုပ်ထားသောလက်ကိုသူမကဆွဲဖယ်လိုက်သည်။ ကျော်ခိုင်လီးကား ခုနက သင်းသင်းမင်းစုပ်ထားသဖြင့်အရည်တွေရွဲနေသည်။ တယမ်းယမ်းဖြစ်နေသည်။ ဒေါ်သီသီစိုးက ကျော်ခိုင်လီးကိုကြည့်ကာ တစ်ချက်ပြုံးလိုက်သည်။ ကျော်ခိုင်လီးကိုသူမလက်ဖြင့်ကိုင်ကာ ညှစ်လိုက်သည်။ အိုးအိုး…ဒေါ်လေးမလုပ်ပါနဲ့။. ဟင်း..ဘာအခုမှကြောက်ပါပြီလဲ…လာခဲ့စမ်း။ ကျော်ခိုင်လီးတံကို သူမကမလွတ်တမ်း ညှစ်ထားပြီး သူမအခန်းဘက်သို့ဆွဲခေါ်သွားသည်။ ကျော်ခိုင်ကား သူ့လီးကို ဒေါ်လေးသီသီစိုး အခန်းထဲသို့ ယက်ကန်ယက်ကန်ဖြင့် ပါသွားသည်။ အခန်းထဲရောက်တော့ ဒေါ်သီသီစိုးက အခန်းတံခါးကို အတွင်းမှ လော့ချလိုက်သည်။ ဒေါ်သီသီစိုးက သူ့လီးကို ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး လက်တစ်ဖက်မှစားပွဲပေါ်ယူထားသော မောင်းချဓါးလေးကိုယူလိုက်ပြီး။ သူ့လီးပေါ်ကို တင်လိုက်သည်။ ကျော်ခိုင်ကား တုန်ယင်သွားသည်… ဒီလောက်သရမ်းတဲ့ လီးကို ဖြတ်ပစ်တာဘဲအေးတယ်။ မ.မလုပ်ပါနဲ့ ဒေါ်လေး…မလုပ်ပါနဲ့… မရဘူး..ဖြတ်ပစ်တာဘဲအေးတယ်… မလုပ်ပါနဲ့ဒေါ်လေး….မလုပ်ပါနဲ့…တောင်းပန်ပါတယ်။
အခုကျတော့ကြောက်တတ်လိုက်တာ…ခုနက မင်း သင်းသင်းကိုလိုးတုန်းက ဒီသောက်ခွက်မဟုတ်ပါဘူး.. .ဒေါ်သီသီစိုးရဲ့မျက်နှာထားတင်းတင်းနှင့်ပြောဆိုမွုက ကျော်ခိုင်ကိုပိုလန့်သွားစေသည်။ လီး..လီးတော့ မဖြတ်ပစ်ပါနဲ့..ဒေါ်လေး… ဒေါ်လေးဖြစ်ချင်တာပြောပါ…ကျွန်တော်အားလုံးလုပ်ပေးပါမယ်ဗျာ။ ဒေါ်သီသီစိုးက မျက်နှာကိုတည်ထားလိုက်ပြီး.။ မင်းသေချာလား…ကျော်ခိုင်…ခိုင်းတာအကုန်လုပ်မှာလား။ ဟုတ်လုပ်ပါ့မယ်…ဒေါ်လေး။ ဒါဆို မင်းကို ငါဒီနေ့ကစပြီးပုံသွင်းတော့မယ်ကျော်ခိုင်။ မင်းကျောင်းမသွားရတော့ဘူး မနက်ဖြန်ကစပြီးမင်းကိုငါကျောင်းထုတ် လိုက်တော့မယ်။ ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲ ဒေါ်လေး။ မင်းကငါ့သမီးကို လိုးခဲ့တဲ့အတွက် အပြစ်ရှိတယ်။ ဒီတော့ မင်းကို ယောင်္ကျားလိင်လုပ်သားအဖြစ်ပုံသွင်းမယ်။ ခင်ဗျာ… ဗျာ..မနေနဲ့..မင်းကိုငါ့အသိ အရာရှိကတော်တွေ၊သူဌေးကတော်တွေဆီမှာ သူတို့စိတ်တိုင်းကျဖျော်ဖြေရတဲ့ ကောင်အဖြစ်ငှားရမယ်.။ ပြီးတော့ မင်းက ငါ့ကိုလည်းနေ့တိုင်းဖျော်ဖြေရမယ်ကြားလား။ ဒေါ်သီသီစိုးစကားကြောင့် ကျော်ခိုင်အံ့အားသင့်သွားသည်။ ငြင်းမယ်တော့မကြံနဲ့..လီးဖြတ်ပစ်မယ်..လို့ဆိုတာကြောင့် သူဘာမှပင်မပြောနိုင်ပါ။ တကယ်တော့ ဒေါ်သီသီစိုးကား သူမတူဝမ်းကွဲကျော်ခိုင်က သူမကို မပစ်မှားဘဲ သူမသမီးကိုမှ ချခဲ့တာကြောင့် စိတ်နာတာရောပေါင်းပြီး။ ကျော်ခိုင်ကို သူမမိတ်ဆွေ ဘွားတော်များထံတွင်ပါ လိင်လုပ်သားအဖြစ် ငှားပြီး စေခိုင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်ခိုင်ဆိုသော ထိုကောင်လေးကို သူမတို့အလိုကျ ဆက်ဆံခိုင်းရမည့် အငှားလင်သဖွယ်အသုံးချပြီး သူမခြေဖ၀ါးအောက်ပြားပြားမှောက်စေရမည်လေ။ အောက်ထပ်စတိုခန်းထဲမှ သင်းသင်းမင်းရဲ့အော်ဟစ်တောင်းပန်သံကလည်း ဆူညံနေပြီ။ ဟင်း..ကောင်မ…အော်နေလိုက်တာမှတ်လောက်အောင်ဆုံးမလိုက်ဦးမယ်..။ ဒေါ်သီသီစိုးက အခန်းပြင်ထွက်သွားသည်.. ကျော်ခိုင်ကိုတော့ သူမအခန်းထဲထည့်ကာ အပြင်မှသော့ပိတ်သွားလေသည်။
ကျော်ခိုင်က အခန်းက ကုတင်ပေါ်မှာငူငူငိုင်ငိုင်ဖြင့်ထိုင်နေသည်။ ခနအကြာမှာတော့ အောက်ထပ်မှကြိမ်လုံးသံတရွမ်းရွမ်းကိုကြားရချေပြီ။ ရွမ်း..အမေရဲ့..ကြောက်ပါပြီ..အမေရဲ့ နောက်မလုပ်တော့ပါဘူး..မေမေရဲ့.. တိတ်စမ်း..တိတ်စမ်း..ရွမ်းရွမ်း… ဒေါ်လေးသီသီစိုးရဲ့ လက်စွမ်းပြကြိမ်ချက်များကို ညီမလေးသင်းသင်းမင်း အလူးအလဲခံနေရမည်ကိုတွေးမိပြီး ကျောပင်ချမ်းသွားမိသည်။ အတန်ကြာတော့ ရိုက်နှက်သံများမကြားရတော့ဘဲငိုသံများလဲတိတ်သွားသည်။ အခန်းသော့ ပြန်ဖွင့်သံကြားရပြီး ဒေါ်သီသီစိုးပြန်ဝင်လာသည်။ ဟင်း..အောက်ထပ်မှာ တစ်ယောက်တော့ကြိမ်စွမ်းပြခဲ့ပြီ။ နင်လည်း အသားမနာချင်ရင်ငါခိုင်းသလိုလုပ်..ကြားလားကျော်ခိုင်။ ကျော်ခိုင်ခေါင်းကိုသာငြိမ့်ပြလိုက်သည်။ ဒေါ်သီသီစိုးက ကုတင်ပေါ်ထိုင်ပြီး….သူမထမိန်ကိုလျှော့လိုက်ကာ လက်နွိုက်လိုက်သည်။ အောက်မှပင်တီကို ဆွဲချွတ်နေဟန်တူသည်။ ကျော်ခိုင်ရင်တွေပင်ခုန်လာသည်။ ဒေါ်လေးသီသီစိုးလှမှန်းတော့သူသိသည်။ ဒေါ်လေးရဲ့ သလုံးသားဖြူဝင်းဝင်းနှစ်ချောင်းကြားမှ ပင်တီအနက်ရောင်လေးကျွတ်ထွက်လာတော့ သူ့လီးထိပ်က အရည်ကြည်များပင်ထွက်ကျလာသည်။ သီသီစိုးကလည်း ဒါကိုသိသည်။ ပင်တီကိုကျော်ခိုင်မျက်နှာသို့ပစ်လိုက်ပြီး .ရော့အခန်းထောင့်က ခြင်းထဲသွားထည့်..လို့ဆိုလိုက်တာကြောင့် ကျော်ခိုင်လဲ ပင်တီကိုယူပြီး အခန်းထောင့်မှာထားတဲ့ အ၀တ်ဟောင်းခြင်းထဲကို သွားထည့်လိုက်ပါတယ်။ ပင်တီကရတဲ့ဒေါ်လေးသီသီစိုးရဲ့စောက်ပတ်နံ့ကြောင့် သူ့စိတ်တွေပိုပြီးလွုပ်ရှားပါတယ်။ ပြီးရင် ဒီကိုလာခဲ့ကျော်ခိုင်မင်းကိုခိုင်းစရာရှိတယ်။ ကျော်ခိုင်က ဒေါ်လေးသီသီစိုးထိုင်နေတဲ့ကုတင်ဘေးနားသွားရပ်လိုက်တော့။
ဒူးထောက်လိုက်စမ်းကျော်ခိုင်။ ကျော်ခိုင်စက်ရုပ်တစ်ရုပ်လိုပင် သူမစေစားရာအတိုင်းသူမရှေ့တွင်ဒူးထောက် ရက်သားဖြစ်သွားသည်။ ဒေါ်လေးသီသီစိုးက ထမိန်ကို အောက်နားစက လှန်ပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းလှန်လိုက်ပါတယ်။ ဖြူပြီးဝင်းမွတ်နေတဲ့ဒေါ်လေးရဲ့ပေါင်တံအလှနဲ့… အမွေးတွေပြောင်နေအောင် ရိပ်သင်ထားတဲ့ ဒေါ်လေးရဲ့ လှပလွန်းတဲ့ အဖုတ်ညိုတိုတိုလေးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ သူအာစေးမိသလို ကြောင်ငေးကြည့်နေမိပါတယ်။ ဒေါ်လေးသီသီစိုးက သူ့ခေါင်းကဆံပင်တွေကို သူမလက်တွေကိုထိုးထည့်ပြီး ဖွပေးနေတဲ့အချိန်မှာ သူ့ရင်ထဲအရမ်းကိုလွုပ်ရှားနေပါတယ်။ ဒေါ်လေးဆီက စောက်ပတ်နံ့ကိုသူ့နှာခေါင်းကရွုရွိုက်မိနေပါပြီ။ ဒေါ်လေးသီသီစိုးက သူ့ခေါင်းကိုဆတ်ခနဲသူမအဖုတ်ဆီဆွဲယူပြီး သူ့နွုတ်ခမ်းတွေနဲ့ စောက်ပတ်ကိုထိတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ အငမ်းမရကို သူ့လျာနဲ့ အဆက်မပြတ်ယက်တော့တာပါဘဲ။ ပြတ်ပြတ် ပလပ်ပလပ်..အအ.. သီသီစိုးလည်ပင်းမှအကြောများပင်ထောင်ထပြီးချွေးစေးလေးများပင်ပြန်လာပါတယ်။ ကျော်ခိုင်ရဲ့လျာအရသာကို တစိမ့်စိမ့်အရသာယူနေတာပါ. စောက်ပတ်အတွင်းသားနုနုလေးတွေနဲ့ စောက်စိကို တူဖြစ်သူကျော်ခိုင်ရဲ့လျာကြမ်းကြီးနဲ့ ထိတွေ့လိုက်တိုင်း စောက်ခေါင်းထဲက သေးဖြန်းဖြန်းထွက်ချင်ချင်ဖြစ်အောင်ကိုကျင်တက်ပြီး အရသာတွေ့နေတာကြောင့် သူမရင်အစုံဟာလဲ နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဗိုက်သားတွေကတွန့်တွန့်သွားပါတယ်။ ကျော်ခိုင်ကလည်း ခုနကသူ့အပြစ်ကြောင့် ဒေါ်လေးစိတ် ကျေနပ်သွားအောင် ဒေါ်လေးရဲ့စောက်ပတ်အတွင်းသားတွေကိုယက် စောက်စိကိုပါစုပ်ပေးတဲ့အပြင် ဖင်ကိုပါယက်ပေးတော့ ဒေါ်သီသီစိုးတို့ အရမ်းကိုခိုက်သွားပါတယ်။ ပြတ်ပြတ်ပြွတ်ပြွတ်… ကျော်ခိုင်ရဲ့စောက်ပတ်ယက်ဖင်ယက်ပေးမွုတွေကောင်းလှတာကြောင့် ဒေါ်သီသီစိုးတို့ ဖင်ကြီးပါတုန်လာပြီး ကျော်ခိုင်လျှာနဲ့ သူမစောက်ပတ်တွေ ဖင်တွေလွတ်ထွက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်သည့်အလား ကျော်ခိုင်ခေါင်းကိုပေါင်ကြားထဲ အတင်းဆွဲဆုပ်ပြီးကပ်ထားပါတယ်။
ပြွတ်..ပြွတ်..အအ…ကျော်ခိုင် စုပ်စမ်း…ကောင်လေး..ပြတ်ပြတ်.. ကျော်ခိုင်ကလည်းမနားတမ်းကိုယက်တာပါ.။ ဒေါ်လေးသီသီစိုးမခိုင်းခင်ကတည်းကပစ်မှားနေတာဆိုတော့ ဒေါ်လေးအခုလိုဒဏ်ပေးတာကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီးပေးဆပ်နေပါတယ်။ စောက်ပတ်ထဲကထွက်လာတဲ့ စောက်ရည်တွေကိုပါ မလွတ်တမ်းယက်ပြီး မြိုချနေပါတယ်။ ဒေါ်သီသီစိုးဟာ ကျော်ခိုင်ကို သူမစိတ်တိုင်းကျစောက်ပတ်ယက် ခိုင်းပြီးလို့ သုံးချီပြီးသွားတဲ့အခါကျော်ခိုင်မျက်နှာကို သူမပေါင်ကြားမှ ဆွဲခွာလိုက်ပါတယ်။ သူမစောက်ရည်တွေနဲ့ကျော်ခိုင်ပါးစပ်ကတော့ပေပွနေတာပါ။ ၀ှီး…သူမကလေတစ်ချက်မွုတ်ထုတ်လိုက်ပြီး… မင်းတော်တော် စောက်ပတ်ယက်ကောင်းတာဘဲကျော်ခိုင်။ တော်တော်ကြိုက်တယ်..ဟုတ်လား။ ဟုတ်..ကြိုက်ပါတယ်ဒေါ်လေး…. အင်း..ထင်တော့ထင်သားဘဲ။ မင်းလိုးတာရောတော်မယ်ထင်တယ်။ ဒေါ်လေးသီသီစိုး သူ့ကိုလိုးခိုင်းတော့မယ်ဆိုတာကျော်ခိုင်သိလိုက်ပြီ။ ဒေါ်လေးသီသီစိုးက အ၀တ်အစားများကိုချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။ ပက်လက်လှန်လိုက်စမ်းကျော်ခိုင်။ သူမအမိန့်အတိုင်းကျော်ခိုင်က ပက်လက်လှန်လိုက်ပါတယ်။ ဒေါ်လေးသီသီစိုးက အ၀တ်တွေကိုချွတ်ချလိုက်ပြိဖြစ်လို့… မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း ဒေါ်လေးသီသီးစိုးရဲ့အလှကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျော်ခိုင်လီးကြီးကလည်းပေါက်ကွဲထွက်မတတ်မာတောင်နေပါတယ်။ သီသီစိုးကလည်း ကျော်ခိုင်သူမအမိန့်ကို မပြောလဲနာခံချင်နေပြီဆိုတာသိပါတယ်။ ပက်လက်လှန်အနေအထားကျော်ခိုင်ရဲ့ ကိုယ်ပေါ်ကိုခွလိုက်ပြီး ကျော်ခိုင်ရဲ့လက်ကို သူမနို့နှစ်လုံးပေါ်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျော်ခိုင်လည်း ဒေါ်လေးသီသီစိုးရဲ့ ဖွံ့ထွားလှသော နို့ကြီးနှစ်လုံးကို ဆုပ်နယ်နေပါတယ်။
သူ့လီးကိုဒေါ်လေးသီသီစိုးကကိုင်လိုက်ပြီး သူမစောက်ပတ်နဲ့ပွတ်ဆွဲနေပါတယ်။ အိုးအိုး လီးထိပ်ဖျားက လိုးချင်လွန်းလို့ ယမ်းခါနေပါတယ်။ ကျော်ခိုင်..မင်းဒေါ်လေးကိုလိုးချင်နေတယ်မဟုတ်လား။ ဟုတ်ဒေါ်လေး…ကြာပြီ.လိုးချင်နေတာ။ ဟင်း..ဟင်း ဒေါ်လေးသိတာပေါ့ ကိုယ့်တူဘဲ မသိဘဲနေမလား။ ဒါနဲ့ မင်းညီမလေးအဖုတ်နဲ့ ဒေါ်လေးအဖုတ်ဘယ်ဟာလိုးလို့ကောင်းမလဲ။ ကျော်ခိုင်တစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်ပြီး…။ ဒေါ်လေးဟာကပိုလိုးလို့ကောင်းမယ်ထင်တယ်…ဒေါ်လေး။ ခစ်ခစ်..ထင်သားဘဲ… မင်းကို ယောင်္ကျားဖာလုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုတာ လုပ်မှာလား။ လုပ်မယ်..ဒေါ်လေး။ မင်း…သေချာတယ်နော်ကျော်ခိုင်….မင်းကိုဒီအိမ်ထဲကအပြင်မထွက်ခိုင်းဘူး။ တစ်နေကုန် လိုးခိုင်းကြမှာနော်….ဟင်းဟင်း။ သူတို့ စောက်ပတ်တွေ ဖင်တွေပါ ခုနကလိုယက်ပေးပြီးသူတို့အားရမှ လိုးခိုင်းကြမှာနော်ကျော်ခိုင်။ ကျော်ခိုင်ကလည်း ဒေါ်သီသီစိုးရဲ့ ရမ္မက်ကြွဖွယ်စကားတွေအောက်မှာနစ်နေတာကြောင့်.. ဒေါ်လေးလိုပုံစံမျိုးသာဆိုလို့ကတော့ တစ်သက်လုံးဘဲ ယက်ပေးရယက်ပေးရ သိပြီလားဒေါ်လေး။ ကြိုက်ပြီကျော်ခိုင်…မင်းစကားနဲ့မင်းနော်….ကဲ စွပ်..ဒုတ်..ဒေါ်သီသီစိုးကသူမစကားအဆုံးတွင် ကျော်ခိုင်လီးတစ်ဆုံး သူမအဖုတ်ထဲ ဖိသွင်းကာထိုင်ချလိုက်တော့သည်။ စွပ်.ဖွတ်..ရှီးရှီး..အိုး..အိုး..အား..အား နူးညံ့လှသော ဒေါ်လေးသီသီစိုးရဲ့ စောက်ပတ်ကြီးရဲ့နူးညံ့မွုနဲ့ လီးချောင်းကို ညှစ်စုပ်ဆွဲယူနေမွုများကို ကျော်ခိုင်အားရပါးရခံစားနေရပြီ။ ဒေါ်လေးရဲ့ နို့နှစ်လုံးကိုလည်းမလွတ်တမ်းဆုပ်ညှစ်ပေးနေတော့သည်။ ဒေါ်သီသီစိုးကလည်း မြင်းရိုင်းမလေးပမာ ကျော်ခိုင်လီးကို အဆက်မပြတ် ဖိသွင်းဆွဲထုတ်ဆောင့်ချရင်း သူ့တူရဲ့လီးအရသာကိုခံစားနေသည်မှာ ကုတင်ကြီးပင် ယိမ်းခါကာ တကျီကျီမည်နေတော့သည်။ ထိုနေ့ကတော့ ကျော်ခိုင်ကို တစ်ချီပြီးတစ်ချီလိုးခိုင်းနေသည်။ မတ်တပ်ရပ်လိုး ဆောင့်ကြောင့်လိုး လေးဖက်ကုန်းလိုး ပက်လက်လိုး လိုးနည်းပေါင်းစုံဖြင့် တစ်ဝကြိးလိုးခိုင်းလိုက် စောက်ပတ်ယက်ခိုင်းလိုက် ဖင်ပေါက်ယက်ခိုင်းလိုက်ဖြင့် ဒေါ်သီသီစိုးကား ကျော်ခိုင်ကို နည်းပေါင်းစုံဖြင့် ခိုင်းစေပြီး ကာမအရသာကိုခံစားနေတော့သည်။
အပေါ်ထပ်က ဧည့်ခန်းဘက်မှာ တံခါးစေ့ထားတာကြောင့် အဲ့အခန်းထဲမှာ မေမေသီသီစိုးတို့ဖဲရိုက်နေတယ်ထင်ရပါတယ်။ ဧည့်ခန်းက သီးသန့်ခန်း ဖြစ်တာကြောင့် တံခါးနဲ့ပါ။ တံခါးဟ နေတာကြောင့်အထဲကိုချောင်းလိုက်ပါတယ်။ အမှတ်မထင် ချောင်းကြည့်မိတဲ့သင်းသင်းမင်းတစ်ယောက် မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် ခေါင်းကိုမိုးကြိုးပစ်ချလိုက်တဲ့အတိုင်းပါဘဲ.။ ကိုယ်လုံးတီးအနေအထားနဲ့ ကိုကိုကျော်ခိုင်က မေမေနဲ့ သူမမိတ်ဆွေ အမျိုးသမီးသုံးယောက် ရှေ့မှာဒူးထောက်နေရတာပါ.။ ပထမဆုံးဒေါ်ဖြိုးဖြိုးအိက ကိုကျော်ခိုင်ခေါင်းကိုဆွဲဆုပ်ပြီး သူမပေါင်ကြားထဲသွင်းကာ စောက်ပတ်တွေ ဖင်ပေါက်တွေကို လျှာနဲ့ယက်ခိုင်းပါတယ်။ အိုး…အား..ပြတ်..ပြတ်…ရှီးရှီး..အား..လားလားကောင်းလိုက်တာ။ စုပ်စမ်း..စောက်စိကိုပါ…အအ.။ ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးအိရဲ့ အရသာတွေ့နေသံကလည်း အခန်းထဲမှာထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ သူမအားရတော့ မေမေသီသီစိုးအပါအ၀င် ဒေါ်နုနုငယ်၊ ဒေါ်မြတ်မြတ်တို့ရဲ့ ဖင်ပေါက်တွေ စောက်ပတ်တွေကိုပါယက်စုပ်ပေးနေရပါတယ်။ သူမတို့အားရအောင် ကိုကိုကျော်ခိုင်လျှာနဲ့ သူမတို့ဖင်တွေ စောက်ပတ်တွေကို ယက်ခိုင်းကြပြိး တအင်းအင်းတအားအားနဲ့ အားရပါးရ ဇိမ်ခံကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့…။ ကိုကိုကျော်ခိုင်ကို အခန်းအလယ်မှာ ချထားတဲ့ ကျွန်းကုတင်ကြီးဆီဆွဲခေါ်သွားကြပါတယ်။ ကိုကိုကျော်ခိုင်ကို ပက်လက်လှန်စေပြီး ခြေတွေလက်တွေကို ကုတင်တိုင်တွေမှာ ကြိုးတွေနဲ့ပူးချည်လိုက်တာကိုမြင်ရပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ကိုကျော်ခိုင်ရဲ့လီးကို သူမတို့အဖုတ်နဲ့ တပ်ပြီး ဆောင့်ဆောင့်ချနေကြပါတယ်။
မေမေသီသီစိုးကပြောလိုက်ပါသေးတယ်… ကျော်ခိုင်ပြီးရင်..မင်း ငါတို့(၄)ယောက်ဖင်ကို တစ်နေကုန်ယက်ပေးရဦးမှာနော်..တဲ့။ ကိုကိုကျော်ခိုင်ကတော့ မေမေနဲ့သူမမိတ်ဆွေ သူဌေးမတွေရဲ့ ကာမပန်းတိုင်ပြီးဆုံးအောင် ခက်ခက်ခဲခဲအမွုတော်ထမ်းနေရပါတော့တယ်။ ရက်စက်လိုက်တာမေမေရယ်..လို့ သင်းသင်းမင်းရင်ထဲကရေရွက်လိုက်ပြီး အောက်ထပ်ကိုအသာပြန်ဆင်းလို့ ငိုကြွေးရင်း သူမအဆောင်ကို ပြန်သွားပါတော့တယ်။ သူမချစ်ရသော ကိုကိုကျော်ခိုင်ကား မေမေနှင့် သူမသူငယ်ချင်းများ၏ အလိုကျ ဖျော်ဖြေရသည့်သူဖြစ်အောင် မေမေသီသီစိုးက ဖန်တီးပုံဖော်ခြင်းခံလိုက်ရချေပြီ ………ပြီးပါပြီ။